isixeko : Murdoch
Owadala : 1975
abafundi (nama.) : 22000
Musa ukulibala ukuba discuss Murdoch University
Wamkelekile kwiYunivesithi Murdoch, Perth, Western Australia.
Murdoch University iqatshelwa njengeziko lophando-ekhokelwa ngamazwe kunye indlela bhetyebhetye ekufundeni.
abafundi bethu ukusebenza abaphandi specialist zokoyisa imingeni ezininzi ebalulekileyo yehlabathi.
abanezidanga zethu ifunwa ngalo ishishini kunye namashishini ngenxa imfundiso ezikumgangatho ophezulu, iindibaniso isidanga eyahlukeneyo, zophando-lwamvanje noluyimfuneko zokufunda ngokwenene-ihlabathi.
Ngelo Murdoch University ePerth, Ostreliya, siza nelunda ukuba ngaphezu 22,000 abafundi kunye 2,000 abasebenzi abasuka kulo lonke 90 kumazwe awohlukeneyo umnqweno kufumanisa, icinge zabo ekugqibeleni wenze umahluko.
Esizikholelwayo ukucinga ivideo nokukhuthaza uluntu lwethu Murdoch lokwabelana ngezimvo, ulwazi echibini kwaye sifumane iindlela ezintsha yokucinga. Yonke Australia, sisheke ingqalelo ekufundiseni obalaseleyo, uphando ekuqhekezeni-phantsi kunye nenani yethu eliphezulu labafundi wanelisekile.
Kwi Western Australia, kwikhampasi yethu South Street linoluhlu amaziko aquka kwisibhedlele ebanzi vet (kunye okuhlinzela equine WA okuphela), zobunjineli pilot isityalo, ekliniki Chiropractic, iziko Media Arts kunye nangaphezulu. Kwakhona siya kuba njengamaziko e Singapore, malunga National Library kumbindi kwimfundo, kwaye eDubai apho abafundi bethu yokusebenzisa zikarhulumente-of-the-art TV kunye nonomathotholo kumagumbi, newsrooms kunye Suites nokuhlela.
Siza Laziwa kumaziko ophando elikhokelayo eAustralia, namashishini sabakho ndawo inkolelo zabo kweezinto neeprojekthi zethu ukubonelela abafundi bethu uphando kunye izazinzulu ithuba yokufumanisa ezimangalisayo.
Murdoch ubajonga ithuba lokuba abafundi ukuba bathathe inxaxheba kwezinye uhlobo amava ezinxulumene nomsebenzi njengoko ifomu ebalulekileyo yokufunda nengxam nganye izifundo zethu. YeYunivesithi Work Integrated Learning (NDIFUNA) Nkqubo ijonge ukubonelela amava okufunda kubalulekile ukuba abafundi, ngelithuba ukuba babonakalise izakhono zabo ophumelele kubaqeshi.
Uyafuna discuss Murdoch University ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
IYunivesithi Western Australia Perth
arie University Sydney
Queensland University of Technology yaseBrisbane